Hiran State - News: War deg deg ah: Gudigii doorashada oo uu is hor taag ku sameeyey madaxweynaha Somaliya ineyka dhoofaan Mogdisho.
War deg deg ah: Gudigii doorashada oo uu is hor taag ku sameeyey madaxweynaha Somaliya ineyka dhoofaan Mogdisho.
Mogdosho:-Dagaal gacan ka hadal gaaray ayaa maanta ka dhacay garoonka diyaaradaha Mogdisho xili ay ka dhoofayeen gudigii doorashada oo iyagu ku sii jeeday wadanka Kenya kedib markii uu is hortaag ku sameeyey madaxweyne Shariif.
Go,aankan uu qaatay madaxweynaha Somaliya ee lagu hor istaagay mudanayasha baarlamaanka ayaa waxuu yimid kedib markii Shiikh shariif amar ku bixiyey ineysan wadanka ka dhoofi karin hal xildhibaan amaba wasiir danbe. arintaan ayaa lagu macneeyey kedib markii madaxweynaha Somaliya dhawaantaan laga mabnuucay safarada uu ku tagayo Yurub inta ay wadanka doorasho ka dhaceyso sidaasi daraadeed ayuu isagana arintan ugu dhaqaaqay.
Madaxweynaha Somaliya waxuu heystaa dhaqalo lagu qiyaasay 20 Million oo dolar sida lagu helayo warar horudhac ah oo ka imaanaya dadka isaga ka ag dhaw. isaga iyo Farmaajo waxey ku heshiiyeen ineysan wadanka doorasho ka dhicin hadii tooda la diidane ay wadanka fowdo iyo jahwareer galiyaan. walow la sheegayo qaar ka tirsan xukumada Farmaajo oo yaqana hanaanka dowladnimo ay aad ula yaabeen waxii uu maanta sameeyey madaxweynaha dhan ee dalka xakuma isagoo awood u isticmaalaya mudanayashii isaga doortay ee sharciyey.
Warkan oo hada inaga soo gaaray garoonka Mogdisho ayaa shegaya in mudanayashu ay safarkooda sii wadan doonaan ayna bixi doonaan maalmaha inagu soo aadan. maalinba maalinta ka danbeysa waxaa soo baxayo midabka rasmiga ee madaxweynaha iyo xukumada Farmaajo ayuu yiri xildhibaan Xareed oo ah afhayeenka gudiga doorashada.
Wasiiradii qurbo joogta ahaa ayaa laga yaabaa iney saameyn ku yeelato amaradaan cusub ee ka soo baxayo hogaamiyahii hore ee midowkii maxkamadaha Shiikh Shariif oo laga cabsi qabo inuu wadanka u gacan galiyo kooxahaan xag jirka ah hadii ay xaaladu sidan kusii socoto.
· admin on May 09 2011 12:57:00 · 0 Comments · 2168 Reads ·
14,633,666 unique visits